Liverpool iyo Manchester City oo Guul waa Weyn gaaray halka United Taako loo Dhigay kulamada Asbuuca Lixaad ee Horyaalka Premier League – Gool FM
CR Shariif September 22, 2018
( Premier League ) 22 Sab 2018. Liverpool ayaa si sahlan ku dhaafay dhigeeda Southamptom markii ay kaga badiyeen 3-0. Goolasha ay ku adkaatay Reds ayaa intooda badan dhashay qeybta hore waxaana goolka daah furka uu ahaa mid uu si kama’ah isaga dhaliyay mid kamida xiddigaha kooxda Martida intaa kamid Joal Matip ayaa goolka labaad madax ugu dhaliyay.
Waxaana goolasha kooxda Liverpool soo gabagabeeyay Mohamed salah oo shabaqa ku dhameystiray kubbad ku Free kick uu kal hore birta ku garaacay laacibka Xherdan Shaqiri.
Waa guushii lixaad oo xariira oo ay gaareyso kooxda Liverpool iyadoo haatan hogaanka ku haya horyaalka.
Dhinaca kale Manchester City ayaa xaaqday kooxda Cardiff kulankii ay ku martigeen kaddib markii ay kaga baduyeen 5-0.
Goolasha ay ugu awood sheegteen kooxda xagaagan cusub horyaalka waxaa bilaabay Kun Aguero waxaana sido kale goolka gaaray xiddigha kala ah Bernando Silva Ilkay Gundogan iyo laba gool uu dhaliyay Riyad Mahrez.
Ugu dambeyn Manchester united ayaa awoodi weysay inay dhaafto kooxdaWolverhampton Wanderers markii kulankooda uu ku dhamaaday 1-1.
United ayaa hogaanka kulanka qabatay waxaana goolka u gaaray markii ugu horreysay tan iyo markii uu biiray laacibka Fred.
Balse kooxda martida ayaa goolka barbaraha la timid qeybta dambe waxaa u dhaliyay goolka ay dhibcaha kula wadaageen cayaariyahanka Joao Moutinho.
Kulanka ka dhacay garoonka Old Trafford waa si weyn loogu soo dhaweeyay oo dib u soo laabtay macalinkii hore ee kooxda Sir Alex Fergusen oo markii ugu horreeysay soo xaadiray garoonka kooxda tan iyo qaliinkii looga sameeyay maskaxda dhawaan.
Shaxda rasmiga ah ee Schalke vs Bayern Munich (Robben iyo Boateng oo keydka la dhigay)
SHEEKO WAALI AH: Ma ogtahay in kooxda ay Juventus Berito la ciyaari doonto uu Cristiano Ronaldo kaligii ku Saddex Jibbaarmayo.....(Sidee???)